VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY… – filazantsaramada
VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY…
Publié parfilazantsaramada	 avril 16, 2014 Laisser un commentaire sur VOAGEJA MANODIDINA IZAHAY, NEFA TSY TERY…
« Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay, satria izao ho hevitray: maty ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra; » (2Kort 5:14)
Vanimpotoana iray mampangirifiry ny fon’ny olona ny fisian’ny andro iray ahatsapàny fa voageja izy. Mafy aminy izany satria tsy vokatry ny fony loatra ary mety hitondràny fahoriana lalina aza. Maro anefa no mety mangeja ny olona sy ny antony mety mahavoageja azy. Anisan’ireny ny fahotana satria rehefa manao ratsy ny olona dia tandindonin-doza isan’andro ny fiainany. Toy izany koa no mahazo ny firenena iray gejain’ny firenen-kafa. Gejain’ny fifanarahana miafin’ireo mpitondra ny firenena, hany ka mitondra faisana ny vahoaka ao aminy. I Paoly sy Timoty anefa, manana fijery hafa: « Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery; » (2Korintiana 4:8a). Fa inona no zava-misy?
Raha mitodika amin’ny hazofijalian’ny Kristy isika, ka manopy maso ny fahoriana nentiny, ary misaina lalina ny lalam-pijaliany dia mahita ny tena fitiavany marina. Io no mahatonga an’i Paoly sy Timoty hilaza eto fa teren’ny fitiavan’I Kristy loatra izy ireo ka izany no tsy mampandry andro sy tsy mampandry alina azy ny amin’ny fijoroana vavolombelona. Izaho izay mitory aminao koa dia teren’ny fitiavany ka tsy mety milamina ny saiko raha tsy milaza aminao aho hoe: Tia antsika Jesosy ka manomana Lanitra vaovao ho antsika Izy. Raha mahatsapa io fitiavany io isika dia teren’izany tsy hitoetoe-poana ihany koa. MiaIa amin’ny fahamboniany ny Tompontsika ka miditra ho eo amin’ny fanetrentena lehibe. Moa tsy izany va no hitantsika ao amin’ny Filipiana 2:6 hoe: « Izay, na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra. Gejain’ny Fitiavany ahy sy ianao Izy ny amin’izany. Ampy Azy, rehefa mino ny maha Zanak’Andriamanitra Azy isika ka mankato izay rehetra efa nandidiany antsika. Hoy Izy: « Fa izao kosa no nandidiako azy: Henoy ny feoko Dia ho Andriamanitrareo Aho, Ary hianareo ho oloko Ka handeha amin’ny làlana rehetra nandidiako anareo, Mba hahitanareo soa. » (Jeremia 7:23). Raha maty Izy dia miara-maty aminy isika rehetra, nefa kosa velona Izy; noho izany dia miara-mitsangana aminy amin’ny maty koa isika ka hiara-belona aminy mandrakizay. Lalina loatra ny fitiavany. Izao ary no izy: Nosatrohana tsilo ny lohan’i Jesosy satria ao amin’ny lohantsika ao no misy ny fibaikoana rehetra maniraka antsika hanao izay mampalahelo an’Andriamanitra. Fantsihana amin’ny hazo fijaliana ny tanan’i Jesosy satria ireo tanantsika ireo no mpanatanteraka ny asa ratsy rehetra. Na mpamono olona na mpamono vady, mailaka loatra ny tanantsika. Ny mpitondra fanjakana na mpitsara na ny hafa koa dia aoka hahatsiaro tena fa ny sonia indray mandrangotry ny tananao dia mety hiteraka fahavoazana tsy hita pesipesenina sy fahafatesana ho an’ny tsy manantsiny. Nofantsihana ny tongotry Jesosy satria ny tongotsika no mandeha tsy an-kiato manatanteraka ny filandratsintsika. Araka izany, rehefa miaraka voahombo amin’i Jesosy isika dia ao aminy ny fanantenantsika rehetra. Ary satria miantoka antsika Izy, na inona na inona manjo antsika dia tsy mihatra amintsika ny fahafatesana. Izay mijery avy eny ivelany dia mahita antsika ho voajeja mafy, saingy isika kosa ao anatiny ao dia mahita fifaliana sy fiadanana.
Eo anatrehan’ny fitiavan’i Kristy antsika ary, Paska toy inona no andrasantsika?: Paska fanafahana manala antsika amin’ny fanangejan’ny Devoly? Sa Paska fanavaozana hitondra antsika amin’ny fanavaozam-panahy? sa Paska Fananganana manangana antsika amin’ny fahafatesana ara-panahy? sa Paska Fiorenana iorenantsika amin’ny finoana an’i Kristy? Sa Paska fanavotana ihoarantsika amin’ny fandrika apetrak’i satana? Maro ireo zava-tsoa entin’ny Paska ho antsika. Tokony handini-tena lalina anefa izaho sy ianao. Rehefa mino isika fa ny fitsanganan’I Jesosy tamin’ny maty no nanala ny fanangejan’ny fahafatesana antsika dia velona mandrakizay miaraka aminy isika.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fiadanany. Amen!
Publié parfilazantsaramada avril 16, 2014 Publié dansUncategorized
TSY MIOVA OMALY SY ANIO ARY MANDRAKIZAY